देउवालाई टक्कर दिने संस्थापनइतरको उम्मेदवार– रामचन्द्र कि शेखर ?
नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४ औं महाधिवेशनको चटारोमा छ । १८ भदौमा सम्पन्न वडा अधिवेशनले पार्टीको मूल नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।
मंसिरको ९ देखि १३ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेछ । यद्यपि २१ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद मिल्न नसक्दा त्यहाँको अधिवेशन अझै अनिश्चित छ ।
नेतृत्व चयनको कुम्भ मेला नजिकिँदै गर्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्न चाहने आकांक्षीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ ।
कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः पार्टी नेतृत्वमा दोहोरिने पक्षमा छन् । उनले फेरि सभापतिमा विजयी हुनका लागि आन्तरिक तयारी सशक्त बनाइरहेका छन् । तर, उनलाई उनकै समूहका विमलेन्द्र निधिले टक्कर दिने भएका छन् ।
निधिले सभापति पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरी कार्यालय स्थापना गरेर नै प्रचार थालेका छन् । बानेश्वरको थापागाउँमा उनले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन् । देउवाका अर्का सहयोगी गोपालमान श्रेष्ठले पनि पार्टी सभापति पदमा आँखा लगाएका छन । स्याङ्जामा हालै भएको एक कार्यक्रममा उनले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
देउवाले २०५९ मा नेपाली कांग्रेस फुटाएर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउँदा श्रेष्ठले देउवालाई बलियो साथ दिएका थिए । त्यसबेला उनी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको उपसभापति थिए । अहिले उनी देउवाको पहिलो उत्तराधिकारी आफू भएको दाबी गर्छन् । देउवाले नेतृत्व छाड्दा आफूले पाउनुपर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । तर, संस्थापन समूहभित्रै उनको त्यति बलियो पकड भने छैन । श्रेष्ठले अहिले उम्मेदवारी घोषणा गरे पनि अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता गरी देउवालाई सघाउने सम्भावना बलियो रहेको कांग्रेसकै नेताहरूको विश्लेषण छ ।
तर, संस्थापन समूहकै निधिले भने पछि नहट्ने गरी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छन् । देउवाले महाधिवेशनमा उम्मेदवारीका बारेमा उनकै निवास बूढानीलकण्ठमा आफ्नो पक्षका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसबेला नै निधिले सभापतिमा आफूलाई सघाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । तर देउवा निधिको प्रस्ताव सुनेर रिसाएका थिए ।
यो महाधिवेशनमा सभापति छाड्दा अर्को महाधिवेशनमा युवा पुस्ता हावी हुने र आफूले कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने अवसर नै गुमाउने विश्लेषणसहित निधि कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने गरी चुनावी प्रचारमा लागेका छन् ।
पौडेल पक्षको सहयोग लिने प्रयासमा निधि
यसपालिको महाधिवेशनबाट देउवालाई कांग्रेस नेतृत्वबाट जसरी पनि बिदा गर्ने पक्षमा संस्थापन इतर समूह छ ।
संस्थापन समूहबाटै निधिले सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको र देउवा पनि चुनावी मैदानमा आउँदा सजिलैसँग जीत निकाल्न सकिने संस्थापनइतर पक्षको आशा देखिन्छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको साथ लिन सके महाधिवेशनबाट सभापतिको कुर्सी सुरक्षित गर्न सकिने विश्लेषणसहित निधिले पनि पौडेल पक्षको विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
‘विमलेन्द्र निधिले महाधिवेशनमा मिलेर जाऔं भन्ने आसयको सन्देश पठाउनुभएको छ । महाधिवेशनको उम्मेदवारले सबैको साथ लिने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो’, पौडेल पक्षका एक नेताले लोकान्तरसँग भने ।
महाधिवेशनमा निधिले शशांक कोइराला र प्रकाशमान श्रेष्ठको सहयोग लिन निकै प्रयास गरेका थिए । कांग्रेसमा यी नेतालाई ‘तीन राजकुमार’ भनेर समेत परिभाषित गर्ने गरिएको छ ।
शशांक बीपी कोइरालाका पुत्र हुन् । विमलेन्द्र कांग्रेसका संस्थापक महेन्द्र नारायण निधिका छोरा हुन् भने प्रकाशमान गणेशमान सिंहका छोरा हुन ।
यी तीन नेताले कांग्रेस सभापतिको उम्मेदवारी तय गर्नका लागि पटक–पटक गरेको छलफल सहमतिमा पुग्न सकेको थिएन । निधिबाहेक कोइराला र श्रेष्ठ संस्थापनइतर पक्षमा छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वबाट आएका नेता कल्याण गुरूङले पनि कांग्रेसको सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
संस्थापनइतरको उम्मेदवार शेखर कि रामचन्द्र ?
देउवालाई जसरी पनि नेतृत्वबाट बिदा गर्ने योजना बनाइरहेको कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहबाट कसलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाउने भन्ने अझै अन्योल छ ।
सभापतिको उम्मेदवार तय गर्नका लागि पटक–पटक भएका छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने अभिलाषा अझै छाडेका छैनन् ।
१३ औं महाधिवेशनमा पौडेल देउवासँग पाँच सयभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भएका थिए । त्यसबेला कृष्ण सिटौलाले संस्थापन पक्षबाट विद्रोह गरेर सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए । केही मत सिटौलाले तान्दा पनि पौडेल ठूलो मतान्तरले पराजित हुने वातावरण बनेको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा हुने गर्छ । त्यसो त दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा सिटौलाले घोषित रूपमै देउवालाई साथ दिएका थिए ।
‘कांग्रेस र देश जोगाउनको लागि’ आफू सभापति हुनुपर्ने दाबी पौडेलले गर्दै आएका छन् । तर, उनको समूहमा पौडेलको नाममा सहमति जुट्नेमा भने आशंका छ ।
भदौ १७ मा पौडेल पक्षले सानेपामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर संस्थापन इतरसमूहबाट सभापतिको साझा उम्मेदवार ल्याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । सभापतिका सबै आकांक्षीलाई दायाँ–बायाँ राखेर पौडेलले आगामी महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवार ल्याउने बताएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा सभापतिका अरू आकांक्षी बोलेका थिएनन् ।
संस्थापनइतर समूहमा अहिले पार्टीका महामन्त्री रहेका शशांक कोइराला तथा नेताहरू शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंहले सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन् ।
भदौ १६ मा बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फूडल्यान्डमा भएको छलफलले साझा उम्मेदवार तय गर्न नसकेपछि १७ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर साझा उम्मेदवार उभ्याउने प्रतिबद्धता उनीहरूले गरेका थिए ।
अनुपम फूडल्यान्डको बैठकमा पौडेलले सभापति एक पटकका लागि आफूलाई छाडिदिन अरू आकांक्षीलाई आग्रह गरेका थिए ।
‘तपाईंहरूले एक पटकलाई छाडिदिनुस् । साथीहरूलाई कहीँ न कहीँ एड्जस्ट गर्न सकिन्छ’, पौडेलको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । तर, शशांक र शेखरले सभापतिमा आफ्नो दाबी नछाडेपछि सहमति हुन सकेन ।
बीपी कोइरालाका दाजु केशवप्रसाद र कांग्रेसकी शक्तिशाली नेतृ नोना कोइरालापुत्र डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेसमा कोइराला परिवारको लिगेसी धान्न सक्ने नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याउने गरेका छन् ।
तर बीपीपुत्र एवं हालका महामन्त्री शशांकले पनि आजको मितिसम्म दाबी त्यागिसकेको अवस्था छैन ।
शेखर कोइरालाले निकै समय अघिदेखि सुक्ष्म ढंगले पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारीको तयारी गरेका छन् । मेडिकल डाक्टरको पृष्ठभूमिबाट आएका शेखर १३ औं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका थिए । उनले आफू एक पटकका लागि मात्रै सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताएका छन् ।
१३ औं महाधिवेशनपछि सबैभन्दा बढी जिल्ला दौडाहामा निस्किने र खट्ने नेताका रूपमा शेखर नै छन् ।
युवा पुस्तालाई साथमा लिएर हिँड्ने र १५ औं महाधिवेशनबाट युवा पुस्तालाई कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजना उनले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । शेखरलाई कांग्रेसभित्रको युवा पुस्ताको पनि बलियो साथ रहेको छ ।
कांग्रेसमा कोइराला परिवारको ‘लिगेसी’ले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । त्यसबाहेक शशांक र सुजाताको पनि साथ पाएमा संस्थापनइतरको साझा उम्मेदवार शेखर बन्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको नेताहरू बताउँछन् ।
शेखर उम्मेदवार बन्दा प्रकाशमान श्रेष्ठको पनि समर्थन रहन सक्ने ती नेताको भनाइ छ । त्यसो हुँदा १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार शेखर कोइराला कि रामचन्द्र पौडेल भन्ने मात्रै छिनोफानो हुन बाँकी रहेको एक नेताले बताए ।
दुई नेताले दुवैलाई विन–विन हुने गरी सहमति गरेर अगाडि बढ्न सक्ने ती नेता बताउँछन् । ‘महाधिवेशनलगत्तै संसदीय निर्वाचन सम्मुखमा छ । एक जनाले पार्टी र अर्कोले सरकारको जिम्मेवारी लिने गरी सहमति पनि हुन सक्छ । तर, कसलाई कुन जिम्मेवारी भन्ने टुंग्याउन पनि सजिलो छैन । दुवै जना सरकारको नेतृत्वमा नपुगेकाले दुवैलाई सत्ताको लोभ हुन पनि सक्छ’, ती नेताले भने ।
कांग्रेसका युवा नेता डा. चन्द्र भण्डारी भने आगामी महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नेताहरूबाट पनि निकास मिल्ने बताउँछन् ।
‘कांग्रेसलाई नेताहरूबाट पनि निकास चाहिएको छ । युवा पुस्ताले कांग्रेसको नेतृत्व नगरेसम्म देशले विकासको गति समात्न सक्दैन,’ भण्डारीले भने ।
४–५ वर्ष मेहनत गरेर कांग्रेसभित्र युवाको टीम बनाएको र अबको महाधिवेशनमा पनि त्यसलाई अघि बढाउने भण्डारीले बताए ।
‘वर्तमान राजनीतिको निकास मात्रै खोजेका छैनौं, वर्तमान राजनीतिको सोच, दृष्टिकोणबाट पनि निकास दिन चाहेका छौं । सोच, नेतृत्व र समाज परिवर्तनको तीनवटा कुरा लिएर हामी अगाडि बढेका छौं । त्यसैअनुसारको उम्मेदवारलाई अघि बढाउँछौं’, भण्डारीले भने ।
उनले थपे, ‘लूटतन्त्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । पार्टी नेताको नाममा, मन्त्रीको नाममा हुने राजनीतिका कारण जनताले धेरै दुःख पाए । पार्टी बनाउनमा भूमिका खेल्न सक्छौं भन्ने हामीलाई छ । हामी मध्यमार्गबाटै यो पार्टीलाई निकास दिन चाहन्छौं । नेताहरूबाट पनि हामी पार्टीलाई निकास दिन चाहन्छौं’, उनले भने ।
‘गगन थापाले पहिले उम्मेदवार बनेको हुँ, फेरि पनि उम्मेदवार हुन चाहन्छु भन्नुभएको हो । उहाँलाई समेत समेटेर पदाधिकारीको उम्मेदवारी घोषणा गर्छौं’, भण्डारीले भने ।
कांग्रेसमा तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका कृष्णप्रसाद सिटौला पनि सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने पक्षमा छन् । उनले पनि आफ्नो सेटमा युवा पुस्तालाई समेट्ने प्रयाससहित छलफल गरिरहेका छन् ।
पौडेल पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई महासचिवको उम्मेदवार बन्न सिटौलाले प्रस्ताव गरेका छन् । तर, पौडेलले भने निर्णय गरिनसकेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।